Midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku adkeystay qabashada dibad-baxa Jimcaha – Xorriya Online
Midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku adkeystay qabashada dibad-baxa Jimcaha
Midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxay ku adkeysteen in ay qabanayaan isu-soo-baxa ay iclaamiyeen Jimcaha todobaadkaan isla markaana aysan dheg-jalaq u siin doonin go’aanka kasoo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Afhayeenka musharaxiinta, Daahir Maxamuud Geelle oo Arbacada maanta ah warfidiyeenka kula hadlay magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho, ayaa go’aanka dowladda ku sifeeyay “sharci darro” wuxuuna ku nuux-nuux-saday in aysan “u hogaan-sami karin isbaaro iyo argagixiso“.
Sidda laga soo xigtay Daahir Geelle, musharaxiinta ayaa kadib kulan ay maanta ku yeesheen Hotel Jazeera ee Muqdisho waxay isla qaateen in ay mudaaharaadka qabtaan Jimcaha isla markaana uusan dib-u-dhici doonin.
“Nidaamka muddo xileedkiisa uu dhamaadey ee Farmaajo waa midka sharciga diidan. Waxaan leenahay fal isbaaro iyo argagixiso uma hogaan-sami doono. Musharaxiinta waxay isla qaateen in dibad-baxa nabadeed uu qabsoomi doono maalinta Jimcaha,” ayuu hadalkiisa ku daray musharaxa.
Iyadda oo cuskaneysa xaalad ammaan iyo safmarka Coronavirus, xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay waxay sheegtay in ay mamnuucdey banaanbaxa isla markaana aysan aqbali doonin “in nolosha dadka halis la geliyo“.
“In nala qasbo ma aqbali karno, waxaan go’aansanay inaan difaacano xuquuqdeena dastuuriga ah, waxaan rabnaa in laga waantoobo isbaarada naloo dhigtay, bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay ka soo qeyb gala mudaharaadkaas Jimcaha, waan ognahay culeys ayuu leeyahay, laakiin haddii aan iska dhaafno waa ‘gumoobeysaan’ dowladda federaalka waxay ku tumaneysaa qodobo dastuuri ah, waa inaan dhahno kuma tuma kartaan,” ayuu yiri Daahir Geelle.
Si kastaba, nudaaharaadka ayaa la filayaa in Jimcadda uu ka qabsoomo barxadda Daljirka Daahsoon ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho halkaas oo durba ay dowladda federaalka ah ku daabushay ciidamo ay dooneyso in ay kaga hortagto in mucaaradku ay halkaas isugu yimaadaan maalinta la asteeyay.